Ukuvula i-Layer Layer kwi-Photoshop
Software Ukwenziwa kwemizobo
Indlela Yokuvula Umgca Wentlaba kwi-Photoshop
Isithombe sam sikhombisa iskhiya kwi- palette yecala . Ndiyivula njani ifayile? Kukho iindlela eziliqela kulo mbuzo kwaye lowo ukhethayo kufuneka alungele kakuhle ukuhamba komsebenzi wakho.
Uninzi lweefoto ezivulekileyo ngasemva zivaliwe. Ukuyivula, kufuneka uguqule imvelaphi kwinqanaba. Unokwenza oku ngokuchofoza kabini kwinqanaba langasemva kwimibala yepale kunye nokuqamba kwakhona umgca, okanye ngokuya kwimenyu: Uluhlu> Olutsha> Umqolo ukusuka kwiNkcazo .
Oku kusebenza kodwa ujongene nobungozi obukhulu xa uhamba ngokufanelekileyo ukusebenza kumfanekiso ovuliwe. Ngoko umntu ukhusela njani yangaphambili ngaphandle kokuvula umgca wendawo yangaphambili?
Uninzi lwezinto ezibonakalayo ziphinda ziphinda ziphinde ziphinde ziphinde zenze uhlaziyo lwazo lwalowo uphinda. Unokwenza oku ngokukhupha umgca osikhiweyo phezulu kwe-icon entsha ye Layer kwiPaneli yeeLayibrari okanye ngokukhetha uluhlu kunye nokukhetha Uhlaziyo oluvela kwimenyu ye-Context. Oku kwenziwa ngenxa yokuba, ukuba benza iphutha okanye batshintshe into engasebenzi kakuhle, banokuphosa uluhlu olutsha. Oku kulandela ukulawulwa kwe-Photoshop engabhalwanga: Musa ukusebenza kwinto yokuqala.
Enye indlela ukuguqula umgca osikhiweyo kwi-Smart Object .Lokhu kukhusela umfanekiso wokuqala.
Enyanisweni, umntu unokuphendula umbuzo aze abuze: Kutheni na ukukhathazeka ngokuvala umgca wesiseko? Ingxenye yempendulo ibuyela kwiinguqu zokuqala ze-Photoshop ukuya kwiindawo zezemidlalo - i-Photoshop 3 eyafika ngo-1994. Ngaphambi koko, nayiphina imifanekiso evuliwe kwi-Photoshop yayisemva.
Uluhlu lwesiseko luvalelwe nje ngokuba lufana nomgca onomdwebo. Yonke into yakhiwe ngaphezu kwayo. Enyanisweni, umgca wesiseko awuyi kuxhasa ukukhanya ngenxa yokuba, ngokuqinisekileyo, imvelaphi, ngasentla apho, zonke ezinye izitha zihleli. Kukho umboniso obalaseleyo ukuba uluhlu lwangemuva lukhethekileyo. Igama loluhlu lugqwesileyo.
Kukho ezinye iimpazamo ezihambelana nomqolo ongasemva ongase uhlangabezane nayo. Ngokomzekelo, vula idokhumenti entsha engenanto. Into yokuqala uyabona ukuba umgca ungumhlophe. Ngoku ukhetha i-marquee itekisi kunye nokukhetha Hlela> Vala . Unokulindela ukuba ungaboni nto yenzeke okanye iphethini yokubhekisa ibonisa ukukhanya. Awuyi. Ukukhethwa kugcwele abamnyama. Nantsi ke. Ukuba ukhangele phambili kunye nemibala yangemvelaphi uza kubona umnyama ngumbala wesiqalo. Oko ungakuqokelela kule ndawo ungagcwalisa kuphela ukhetho kwisithuba sangasemva nombala wesiqendu. A ndi kholelwa? Yongeza umbala omtsha wesiqhelo uze unqunyulwe ukhetho.
Enye into engathandekiyo yiyo. Yongeza umgca uze ubeke umxholo othile kuloluhlu. Ngoku uhambisa umgca wendawo yangasentla ngaphezu kolawulo lwakho olutsha. Awukwazi ukuba uluhlu lwangaphambili kufuneka luhlale luyimvelaphi yombhalo. Ngoku uzama ukuhambisa isalathisi esitsha ngaphantsi kwendawo yangasemva. Siphumo esifanayo. Ulawulo olufanayo.
Ngoko ke unayo. Uluhlu lwangasemva luluhlu olukhethiweyo lwe-Photoshop oluqulethele iimeko ezinzima kakhulu Asikwazi ukuhambisa iziqulatho zazo, asikwazi ukususa nantoni kubo, kwaye zihlala zihlala zingqongqo phantsi. Izimo ezintle ezilula kwaye akukho nto esingenako ukujongana nayo ngenxa yokuba sisoloko sisebenze ngokuthe ngqo kumqolo ongasemva.
Isikhokelo soMyili wokuqonda imibala
Qaphela ukufezekiswa ngeSatifikethi seMatriki esifanelekileyo
Yiyiphi i-Software Best ye-Logo Design?
Ziziphi iindidi ezahlukileyo zeefayile zefonti?
Susa Uthuli kunye neenkcukacha kwiSithombe esicatshulwa ngee-Elephants Elements
Izinto zeMpawu zeMpawu
Yenza Impembelelo yeSepia Tone Impact nge GIMP
Isingeniso kwiZiseko zeMpawu zeMpawu
Konke malunga nokuphuhlisa iiNkqubo zeMfono zeMpilo
Indlela yokwenza ukuFakelwa koPhuculo lweWindows 8.1
Ukubaluleka kwi-Age yobudala: Iinkqubo eziphambili zePen nePhepha yeMidlalo
Imbuzi yeSimulator Iingcebiso kunye neIqhinga
Ukuhlaziywa komdlali weDVD-DDP-BDT360
Indlela yokuxhuma i-iPad kwi-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi
Iimpawu zeDinosaur zamahhala
Ukuhlaziywa kwePrinta yokuPrinta yeSithombe se-Polaroid
Iinkqubo eziphezulu ze-3D Printer
Ukurekhoda i-Macros kwiLizwi 2007
Isoftware ye-Desktop Publishing
I-Top Ten Xbox Imidlalo enye ye-2015
Ndiyakwazi ukuyikhuphela iFayile Ukuba andinayo ifayile yokubuyisela iFayile?
Ukwabelana ngeVidiyo yeeHlabathi kwi-sevenload
Iingcono ezi-5 ze-EDMS Packages
Ngaba Ufanele Uphucule okanye Usetyenzise I-Laptop Yakho?
Indlela yokusetha i-DNS Alias ​​nge-Apache
Yintoni i-Remix 3D?
Ulwazi lwe-MiTeC Inkqubo X v2.7.0
Iinkqubo zokuLawula iNtaba
Ziziphi i-MobileMe Mail Me.com Izicwangciso zeStTP?
I-Nintendo DS, Lite, kunye ne-DSi Cheat Code Entry